Ny aotom-panatanjahan-tena mahazatra mahazatra anay dia tena mampionona. Ity akanjo lava vita amin'ny elastika ity dia ny efitrano fisakafoanana lavorary ao an-trano fanatanjahan-tena na any an-trano.
Pataloha marevaka amoron-dranomasina vita amin'ny lehilahy
Ny lamba volon'ondry sokitra ho an'ny lehilahy
Famolavolana sary manintona mahafinaritra, asa-kanto mahafinaritra, manasongadina ny fahatsaran'ny kalitaon'ny famolavolana zipper an'ny paosy havanana, ny paosy dia azo aforitra mba hanao kitapo, izay mety amin'ny fitehirizana sy ny fitehirizana entana madinidinika.
Pataloha amoron-dranomasina ho an'ny lehilahy
Loose tailoring, Mazava ary Mahafinaritra Ny Drafitra Loose Sy Easy Drawings dia manome anao traikefa amin'ny akanjo milamina.
Ny akanjo fanatanjahan-tena mahazatra an'ny lehilahy amin'ny akanjo miloko amoron-dranomasina
Famolavolana volo matevina, miaraka amina tady, Fanitsiana malalaka sy malefaka amin'ny elastika, manatsara ny fampiononana. Akanjo miavaka mifanohitra amin'ny lamaody mahazatra, samy lamaody ary fampiononana.
Akanjo fohy voatenona maina haingana an'ny lehilahy
Fanapahana 3d mirefy telo heny, fametahana hoditra tsara ary lamba tsara fonosana vita amin'ny elastika tsara sy marefo, elastika tsara, faritra fanitarana lehibe, mifanaraka amin'ny endrika amin'ny vatana, fanamainana tsara amin'ny rivotra, tsy matevina ary ahazoana mitafy haingana.
Fohy vita amin'ny lamba manify haingana an'ny lehilahy
Azo ahitsy ny tady. Elastis ny andilana ary mora ny mametraka azy ary miala. Paosy roa eo an-daniny ary paosy maloto eo an-damosina mba ho mora entina kokoa ny pataloha somary mahia mifanaraka tsara amin'ny hoditra, mampiseho tsipika tena tsara.
Ny fehikibo azo ahitsy dia azo alamina malalaka. Maodely mazava sy loko mamirapiratra. Fanontam-pirinty miloko, volon'ondry matte, malefaka sy malefaka ary mahatsiaro tena mahazo aina.
Fehin-kibo misy elastika, mora miovaova ary mora, mora apetraka ary esorina, mifanentana amin'ny pataloha miendrika volo, endrika tsara, endrika miovaova, afaka manova tsara ny endrik'ireo tongotra.
Lamba firakotra roa sosona, Akanjo fohy vita amin'ny ravina haingam-pandeha ho an'ny lehilahy, Akanjo fohy fanatanjahan-tena haingam-pandeha, Fanodinana santionany sy famokarana, Pataloha fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy, Palitao fanatanjahan-tena,